Farmaajo oo amray dagaal dacaayad oo ka dhan ah Jabuuti & shacabkeeda | SMC
Home WARARKA MAANTA Farmaajo oo amray dagaal dacaayad oo ka dhan ah Jabuuti & shacabkeeda
Madaxweyne Farmaajo iyo kooxaha u adeega dowladiisa ayaa waxa maanta lagu amray in ay dagaal dacaayadeed lagu qaado shacabka iyo dowlada Jabuuti. Dagaalkaan ayaa yimid ka dib markii Dowladda Federaalka Soomaaliya ay sheegtay in gudigii IGAD loo saaray xaqiiqo raadinta khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ay la safteen Kenya.
Waxa aad maanta ka dareemeysaa baraha bulshada dacaayad ay wadaan kooxaha Farmaajo u shaqeeya kaas oo lagu bartilmaameysanayo dalka Jabuuti. Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in Jabuuti ay la safatay Kenya ayna Dowlada Soomaaliya raaligelin ka rabto Dowladda Jabuuti.
Dhanka kale Wasiirka ayaa waxa ku eedeeyay Guddiga IGAD in aysan dhexdhedaad ka noqon arrimaha labada dal iyo in ay qaateen warbixin hal dhinac u xaglinaysa. Wasiir Dubbe wuxuu sheegay in Soomaaliya leedahay cadow faro badan oo doonaya in uu dumiyo rajada iyo dawladnimada u soo bidhaantay.
Previous articleShir Albaabada Uxirnaa Oo Farmaajo & Wafdi UK Ka Socday